ဝက်သားဒုတ်ထိုးဆို အမုန်းဆွဲဗုန်းကြဲပြီးစားမယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက် ဝက်သားဒုတ်ထိုးဘူဖေးလာပါပြီ… – FoodiesNavi
ဝက်သားဒုတ်ထိုးဆို အမုန်းဆွဲဗုန်းကြဲပြီးစားမယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက် ဝက်သားဒုတ်ထိုးဘူဖေးလာပါပြီ…
By yin sandi On July 3, 2018 0
စနေ ၊ တနင်္ဂနွေအားလပ်ရက်တွေရောက်တိုင်း ဘာသွားစားရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီး ? အကြံအိုက်နေရင်တော့ စနေ ၊ တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာသာ ဝက်သားဒုတ်ထိုးအဝစားနိုင်တဲ့ ” Vestige Cafe ” အကြောင်း ပြောပြပေးမယ်နော်။ အူချို ၊ အူမကြီး ၊ အရိုးနု ၊ လျှာ ၊ နားရွက် ၊ အသဲ ၊ အသားကိုယ်ကြိုက်တဲ့အစိတ်အပိုင်းကြိုက်တာကို အဝစားလို့ရမယ့်အပြင် အအေးလည်း Free Flow ကိုမှ (၂)သောင်းကျပ်ဆိုတော့ အရမ်းမစားနိုင်တဲ့သူတွေအတွက် သိပ်မတန်ပေမယ့် ဝက်သားဒုတ်ထိုးဆိုတာနဲ့ အမုန်းဆွဲဗုန်းကြဲပြီးစားမယ်ဆိုတဲ့ အစားတစ်လိုင်းတို့အတွက်ကျတော့ ရှယ်တန်တယ်ဗျို့ ?
ကြိုတင်စာရင်းသွင်းမယ်ဆိုရင်တော့ (၁)သောင်း(၈)ထောင်ကျပ်ပဲ ကျသင့်မှာနော်။ သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်တဲ့ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်မှုတွေနဲ့ သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဆိုင်လေးထဲမှာ သန့်သန့်လေးစားရမှာဆိုတော့ သွားစားဖို့မောင်းတင်ထားလိုက်တော့နော်။ အရသာကလည်းဂွတ်ရှယ် အသားလေးတွေကိုအိနေတာပဲ အရွတ်၊ နားရွက် ၊ အရိုးနုလေးတွေဆိုရင်လည်း တထုတ်ထုတ်နဲ့ ဝါးလို့ကောင်းမှကောင်း ? ဝက်သားဒုတ်ထိုးရဲ့အဓိကဖြစ်တဲ့ အချဉ်ရည်နဲ့ဟင်းရည်လေးကလည်း လုံးဝရှယ်ပဲ ? ဟင်းရည်ကအရမ်းအချိုကြီးမဟုတ်ဘဲ ဆိမ့်ဆိမ့်လေးနဲ့သောက်လို့ကောင်းမှကောင်း အချဉ်ရည်ကလည်း အစပ်အဟပ်တည့်နေရောပဲ။
ဆိုင်က ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းနဲ့စက်မှု(၁)လမ်းထောင့်မှာရှိတဲ့ Myanmar Plaza မှာဆိုတော့ အားလပ်ရက်မှာ Shopping ထွက်ရင်း ဝင်စားမယ်ဆိုရင်လည်း အဆင်ပြေတယ်နော်။ ဝက်သားဒုတ်ထိုးဘယ်လောက်များများစားနိုင်လဲဆိုပြီး ဘော်ဒါတွေနဲ့ Challenge လုပ်ပြီးသွားစားကြည့်လိုက်တော့နော်။
Image Source: vestigecafe
ကြွေလောက်တဲ့ Promotion တွေနဲ့ မာလာရှမ်းကောဆိုင်အသစ်လေး ဖွင့်တော့မယ်နော်…….